11 E wee nye m okporo ahịhịa amị+ nke yiri mkpara, sịkwa m: “Bilie ma tụọ ebe nsọ nke ụlọ nsọ+ Chineke na ebe ịchụàjà ya na ndị na-efe ofufe n’ime ya.
2 Ma hapụ ogige nke dị n’èzí+ ebe nsọ nke ụlọ nsọ ahụ kpamkpam, atụkwala ya atụ̀, n’ihi na e nyewo ya ndị mba ọzọ,+ ha ga-azọkwasịkwa obodo nsọ+ ahụ ụkwụ ruo ọnwa iri anọ na abụọ.+
3 M ga-emekwa ka ndị àmà m abụọ+ yiri ákwà iru uju+ buo amụma+ ruo otu puku ụbọchị na narị ụbọchị abụọ na iri isii.”
4 Ọ bụ ha ka osisi oliv abụọ ahụ+ na ihe ndọba oriọna abụọ+ ahụ na-anọchi anya ha, ha guzokwa n’ihu Onyenwe ụwa.+
5 Ọ bụrụkwa na onye ọ bụla achọọ imerụ ha ahụ́, ọkụ na-esi n’ọnụ ha apụta ma repịa ndị iro ha;+ ọ bụrụkwa na onye ọ bụla achọọ imerụ ha ahụ́, a ghaghịkwa isi otú a gbuo ya.
6 Ha nwere ikike imechi eluigwe+ ka mmiri ọ bụla ghara izo+ n’ụbọchị niile ha na-ebu amụma, ha nwekwara ikike n’ebe mmiri dị, ime ka ha ghọọ ọbara,+ nweekwa ikike iti ụwa ụdị ihe otiti niile ugboro ole ha chọrọ.
7 Mgbe ha gbasịrị àmà ha, anụ ọhịa ahụ nke ga-esi n’abis rịgota+ ga-ebuso ha agha, meriekwa ha ma gbuo ha.+
8 Ozu ha ga-adịkwa n’okporo ámá nke obodo ukwu ahụ, nke a na-akpọ Sọdọm+ na Ijipt n’ụzọ ime mmụọ, bụ́ ebe a kpọgidere Onyenwe ha n’osisi.+
9 Ndị si ná ndị niile na ebo niile na asụsụ niile na mba niile+ ga na-ele ozu ha ruo ụbọchị atọ na ọkara,+ ha ekweghịkwa ka e lie ozu ha n’ili.
10 Ndị bi n’ụwa na-aṅụrịkwa ọṅụ+ n’ihi ihe mere ha, na-emekwa onwe ha obi ụtọ, ha ga-ezigakwara ibe ha onyinye,+ n’ihi na ndị amụma abụọ ndị a mekpara ndị bi n’ụwa ahụ́.
11 Mgbe ụbọchị atọ na ọkara ahụ gasịrị,+ mmụọ nke ndụ nke si n’ebe Chineke nọ banyere n’ime ha,+ ha wee guzo n’ụkwụ ha, oké egwu wee jide ndị na-ahụ ha.
12 Ha wee nụ oké olu+ nke si n’eluigwe sị ha: “Gbagotenụ n’ebe a.”+ Ha wee gbagoro n’ime eluigwe n’ígwé ojii, ndị iro ha hụkwara ha.
13 N’oge awa ahụ, e nwere oké ala ọma jijiji, otu ụzọ n’ụzọ iri+ nke obodo ahụ wee daa; ala ọma jijiji ahụ gbukwara puku mmadụ asaa, ndị fọdụrụ wee tụọ ụjọ, nyekwa Chineke nke eluigwe otuto.+
14 Ahụhụ nke abụọ+ agafeela. Lee! Ahụhụ nke atọ na-abịa ọsọ ọsọ.
15 Mmụọ ozi nke asaa wee fụọ opi ya.+ Oké olu wee kwuo okwu n’eluigwe, sị: “Alaeze nke ụwa aghọwo alaeze nke Onyenwe anyị+ na nke Kraịst ya,+ ọ ga-achịkwa dị ka eze ruo mgbe niile ebighị ebi.”+
16 Ndị okenye iri abụọ na anọ+ ahụ ndị nọ ọdụ n’ocheeze ha n’ihu Chineke wee daa gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala,+ kpọọrọ Chineke isiala,+
17 sị: “Anyị na-ekele gị,+ Jehova Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,+ Onye dị adị+ na onye dịbu adị, n’ihi na i werewo ike gị dị ukwuu+ wee malite ịchị achị dị ka eze.+
18 Ma mba niile were iwe, iwe gị wee bịa, na oge a kara aka maka ikpe ndị nwụrụ anwụ ikpe, na inye ndị ohu gị bụ́ ndị amụma+ na ndị nsọ na ndị na-atụ egwu aha gị, ndị nta na ndị ukwu,+ ụgwọ ọrụ ha,+ na ibibi+ ndị na-ebibi ụwa.”+
19 E wee meghee ebe nsọ nke ụlọ nsọ Chineke dị n’eluigwe,+ a hụkwara igbe+ ọgbụgba ndụ ya n’ebe nsọ+ nke ụlọ nsọ ya. Àmụ̀mà wee gbuo, a nụkwara olu, égbè eluigwe gbara, ala ọma jijiji mekwara, oké akụ́ mmiri ígwé dakwara.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D66%26Chapter%3D11%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl